IINGCAMANGO EZINGAMA-60 ZEGLOCK TATTOO YABANTU-UYILO LWEVOLOVOLO - UHLOBO
Iingcamango ezingama-60 zeGlock Tattoo yaBantu-Uyilo lwevolovolo
Ambalwa amagama ompu abonwa kwangoko njengeGlock, kwaye elo gama liphethe ilifa kunye noxanduva oluhlala luhleli kwiindawo ezilinganayo.
Uthotho lweepolymer ezenziwe ngotywala, ezivaliweyo ezophule iimipu ezizenzekelayo, i-Glock yaveliswa okokuqala nangomkhosi wase-Austrian, kwaye kamva yayiya kuba sisiseko samapolisa ngenxa yokuthembeka kwayo kunye nemigangatho yokhuseleko.
Umpu weplastiki unokuba wawuthatha isabelo sawo esifanelekileyo sabantu abathandabuzayo ekuqaleni, kodwa iGlock ibonakalise ukubaluleka kwayo, kwaye akukho ngaphantsi kwimo ye tattoo.
Umntu othandwayo eluntwini, iGlock sisiqwenga esingenangqondo somntu ophethe umpu olinganayo. Inkangeleko inokubakhohlisa, kwaye ukusebenza okunamandla kukaGlock kungqina ukuba into ekhangeleka ngathi yinto yokudlala komnye umntu inokuba kukufa komnye. I-Glock tattoo ithetha ngobuhlobo bakho bokusebenza ngaphezulu kwefom; awunomdla wokufihla isitena, kodwa udinga into elula kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Esi ngumpu kwabo bafuna ukuzikhusela kunye nabathandekayo babo ngengxabano encinci okanye isithintelo, kwaye i-Glock tattoo yakho ngokuqinisekileyo iya kuthumela umyalezo kwihlabathi ukuba kuya kuba yimpazamo enkulu ukuwela umendo wakho unengxaki engqondweni.
I-Glock inokuba yinto eyintandokazi yoluntu kunye nenqaku eliqhelekileyo kwizalathiso zenkcubeko ye pop, kodwa uyaliqonda ixabiso lokwenyani lesiqwengana. Umdlali ophakamileyo oqhelekileyo kuvavanyo lokhuseleko kunye nozinzo, iGlock bubungqina bokuba umntu unakho kwaye kufuneka exhomekeke kwizixhobo zabo zokuzikhusela nokuba zithini na izinto okanye zilandelwa. I tattoo yakho yeGlock zombini yingxelo kunye nobungqina bendoda ezikhuselayo kunye neyayo.
Bona ngakumbi malunga - Iimbono ezingama-51 eziGqwesileyo zeTattoo
7 izimvo zoyilo olukhulu olungaphantsi
ukakayi oluncinci kunye neethambo ezinqamlezileyo
iidesika zangasemva kuhlahlo-lwabiwo mali
Iintsingiselo zetattoo yamadoda
izitena kunye nelitye langaphandle izimvo
ucingo oluncinci lweyadi engaphambili
iinwele zamadoda kwi50s yabo
ngaba ucebisa amagcisa ngetattoo
I-ace yoyilo loyilo lomhlakulo
into 1 kunye nento 2 tattoos